Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinonzi zvaisungwa nemapurisa kunyange zviine magwaro ekugara muSouth Africa.
Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum, rinoti rine hurongwa hwekusungisa hurumende yeSouth Africa nemhosva yekusunga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi zvisiri pamutemo, uyewo kubvumidza mapurisa kupinda muzvitoro zvevabvakure ava achisecha asina magwaro anoapa mvumo yekuita izvi.
Vanoti pavanhu mazana manomwe vakasungwa nemusi weChitatu muJohannesburg, mazana maviri vaburitswa muhusungwa mambakwedza, uye pavanhu ava pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri.
Mapurisa akasunga vanobva kunze kwenyika ava muchirongwa chinonzi chakanga chakanangana nekuchenesa mukati meguta reJohannesburgkubva kuvanhu vasina magwaro pamwe nevanopara dzimhosva.
Mutungamiri wedunhu reGauteng, VaDavid Makhura, vakazivisa kuburikidza nedandemutande reTwitter, kuti mapurisa akawanawo zvombo zvakasiyanasiyana pamwe nezvigadzirwa zvinonzi zvaive nemazita ekunyepera zvakawanda mukusecha zvivakwa zvemukati meguta kwaakaita.